‘अविलम्ब बैठक बसी विवाद समाधान गर’ : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरै‘अविलम्ब बैठक बसी विवाद समाधान गर’
अनुशासन आयोगले भन्यो
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला अनुशासन आयोगले अविलम्ब बैठक राखी विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच मतभेदका कारण पार्टीभित्रको विवाद चर्किँदै गएको बेला आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले अविलम्ब पार्टी बैठक राखेर विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई सुझाव दिएका हुन् । सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत आयोग अध्यक्ष बोहोराले आरोप प्रत्यारोप रोक्नुपर्ने आग्रह गर्दै पार्टीभित्र देखिएको विवाद बैठक बसेर समाधान गर्न नेतृत्वलाई भनेका छन् ।
‘संकीर्णता, आग्रह–पूर्वाग्रह, गुटबन्दी र रिस रागले पार्टी चल्न सक्दैन । उत्तेजना, आवेग र गालीगलौजले समस्याको हल हुँदैन । यसले त विवादलाई सरल होइन, झन् जटिल बनाउँछ,’ आयोग अध्यक्ष बोहोराले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘तनावलाई शिथिल नगरी कि वार कि पार भन्ने ठाउँमा पु-याउँछ । विनाशको बाटोतर्फ जाने यस्ता कुराको कल्पना हामीले गर्न मिल्छ ? यो गल्ती हामीले कदापि गर्नु हुँदैन । पार्टीमा समस्या छन्, तिनलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ । पार्टी विधानबमोजिम त्यसको समाधानमा पहल गुर्नपर्दछ ।’
पार्टी नेतृत्वको सोच सधैं फराकिलो हुनुपर्ने भन्दै उनले हृदयमा विशालता नभए त्यो कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘पार्टीका जिम्मेवार नेतृत्वगणप्रति मेरो विनम्र आग्रह छ, पार्टी एकता आजको आवश्यकता हो । पार्टी एकताको विकल्प छैन । समृद्ध समाजवादी समाज बनाउने ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्न यो एकता जरुरी थियो र भविष्यसम्म छ । फुट र विभाजन प्रतिगामी कुरा हुन् । विगतमा हामीले पार्टी फुटको दुःखद अवस्था बेहोरिसकेका छौं । अब यस्ता गल्तीबाट शिक्षा लिनुपर्छ,’ बोहराले भनेका छन् ।
पार्टी एकताका बाँकी सबै काम छिटो पूरा गर्दै पार्टी एकता प्रक्रियालाई दिगो र सुदृढ पार्न केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्मका पार्टीका सबै शक्तिलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘पार्टीमा देखापरेका अनुशासन र पद्धतिहीनता, गुटबन्दी र अराजकता, कम्युनिस्ट आचरणमा विचलन जस्ता विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई सघन वैचारिक संघर्षद्वारा परास्त गरौं । संयम, धैर्य र राजनीतिक सुझबुझसहित जनता र राष्ट्रका समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र गतिशील बनाउन नेतृत्वगणप्रति विशेष अनुरोध गर्दछु,’ बोहोराले भनेका छन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेकपाको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण रहिआएको स्मरण गर्दै बोहोराले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा यसले गरेको संघर्षलाई कसैले इन्कार गर्न नमिल्ने जनाएका छन् ।
‘यस्तो महŒवपूर्ण भूमिका भएको पार्टीमा हिजोआज दिनहुँजसो सम्पूर्ण जनसमुदाय र आम पार्टीपंक्तिलाई निराश पार्ने ‘गालीगलौज’ ‘निन्दा भत्र्सना’ ‘आरोप–प्रत्यारोप’ र ‘पार्टी विभाजन’ जस्ता सुन्नै नसकिने अत्यन्त अप्रिय कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट आउने गरेका छन् । यो हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आन्तरपार्टी विवाद सञ्चालनका निकै राम्रा माक्र्सवादी परम्परा रहेको भन्दै बोहोरोले विगतमा पार्टीमा उत्पन्न ठुल्ठूला विवादहरू पनि अन्तरपार्टी संघर्षका माध्यमबाट समाधान भएका धेरै उदाहरण रहेकाले त्यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले विधि र पद्धति पार्टी सञ्चालनका प्राण भएको पनि बताएका छन् ।
‘पार्टीका सम्पूर्ण निकाय अनुशासन आयोग, लेखा र निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागलगायत एकताका बाँकी कामहरू आजसम्म थाँतिरहेका छन् । यो दुःखद पक्ष हो । तीन महिना, एक महिना पन्ध्र दिन र दश दिनभित्र पूरा गर्ने भनेर भाखा राख्दै आएको पनि अहिले २९ महिना बितिसकेको छ,’ बोहराले भनेका छन्, ‘तर, विधानले एकैछिन असंगठित राख्न नमिल्ने महŒवपूर्ण कमरेडहरू वर्षाैंसम्म जिम्मेवारीविहीन हुँदा पार्टी नेतृत्वलाई किन घोच्दैन ? किन पोल्दैन र ? यति महŒवपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा किन राखिँदैन ? यतिसम्म कि लामो रस्साकस्सी र विवाद पछि समाधान हेतु कार्यदलले प्रस्तावका रूपमा ल्याएको तथा २६ भदौ २०७७ को स्थायी कमिटी बैठकले कार्यान्वयनको निमित गरेको निर्णयसमेत आजपर्यन्त अल्पत्र छन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता कतै देखिएकै छैन । बरु त्यसलाई अनेकौं बहानामा पन्छाउने काम भइरहेको छ ।’
विवाद समाधानको पहल गर्दै महासचिव
यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच सोमबार छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर पौडेल दाहाल निवास खुमलटार पुगेका हुन् । महासचिव पौडेल आफैंले पनि विवाद समाधानको पहल थालेका छन् ।
महासचिव पौडेलले विधानअनुसार पार्टी बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीलेको सन्देश दाहाललाई जानकारी गराएका छन् । आफूलाई भेट्न आएका महासचिव पौडेलमार्फत दाहालले सचिवालय बैठक अविलम्ब बोलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘हामीले ४८ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका छौं, बैठक बोलाउन ढिला नहोस्,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष दाहालले पौडेलसँग आफूलाई सधंै किनारामा पार्ने काम भएको, ओलीबाट अपमान भएको, पार्टी एकताको समयमा भएका सहमति उल्लंघन भएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका पाँच नेताले शनिबार लिखित रूपमै बैठक राख्न ओलीसँग माग गरेका थिए ।
दुई दिनभित्र बैठक बस्नुपर्ने भए पनि सोमबारसम्म बैठकबारे सचिवालय सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नबोलाए दाहाल–नेपाल समूह बैठक बोलाउने आन्तरिक तयारीमा रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नैपर्छ : वरिष्ठ नेता खनाल
यसैबीच नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभित्र देखिएको विवादबारे छलफल गरेर समाधान गर्न पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नैपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित रूपमै बैठक बस्न आग्रह गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै खबर नआएको उनले बताए ।
‘पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नैपर्छ । पार्टीभित्रको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको कारणले फेरि पार्टीमा विवाद भएको हो,’ खनालले भने, ‘त्यसैले अब पनि पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक राख्नमा ढिलाइ गर्नुभएन, त्यही समस्याको समाधान हुन्छ ।’
पार्टीलाई विधान, विधि, पद्धतिका आधारमा निर्णयअनुसार अगाडि बढाउन नसकेका कारण पार्टीमा द्वन्द्व चर्किएको उनले बताए । बैठक बस्दै नबस्ने, बसे बैठकका निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्ने, आफूखुसी अगाडि बढ्न खोज्ने समस्याका कारण पार्टीमा विवाद भएकाले पार्टी निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
‘हामीले त लिखित रूपमै पार्टी बैठक बोलाउन आग्रह गरिसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीले विधानअनुसार बैठक बोलाउनुहोला,’ खनालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म बैठकका लागि खबर आएको छैन । बालुवाटारले कस्तो निर्णय गर्छ ? हामीले पनि सोहीअनुसार निर्णय गर्छांै ।’
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सचिवालयका पाँच सदस्यले लिखित रूपमै बैठकका लागि आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुपर्ने उनले बताए ।
यसैबीच यसअघि गठन भएको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलका सदस्यसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् । तर, सो छफलमा पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट सदस्य रहेका दुई नेता अनुपस्थित भएपछि बालुवाटार पुगेका अन्य सदस्यहरू चिया खाएर फर्किएका छन् ।
उपस्थित कार्यदलका अन्य सदस्यहरूका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको संकेत गरेका छन् । विघटित कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्न सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने र यसअघिका स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यदल संयोजक महासचिव पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटीका सदस्यद्वय भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे बालुटार पुगेका थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल अनुपस्थित थिए ।
जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका टोलीले एकजना सेवाग्राहीसंग घूस लिइरहेको बेला धनुषाको एक वडासचिवलाई आज पक्राउ गरेको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नं....